INTEGRATED ထုတ်လုပ်သူ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျော့ဘ် » Integrated ထုတ်လုပ်သူ
ရာထူး: Integrated ထုတ်လုပ်သူ
ကုမ္ပဏီ: ကျနော်တို့ Unlimited Are ™
Magician ။ Juggler ။ ဗေဒင်ဟောသောသူ။ Project မှစီမံခန့်ခွဲမှုထိပ်တန်းသူရဲကောင်း။
ကျနော်တို့လုံ့လရှိသူ, ပါးရည်နပ်ရည်, စီမံကိန်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှုပိုနေမြဲကျားနေမြဲအခြေအနေကိုစိန်ခေါ်ဖို့ပိုနှစ်သက်သူကိုဘက်ပေါင်းစုံထုတ်လုပ်သူများအာရုံစူးစိုက်န့်အသတ်ရှာသောနေကြသည်။ စဉ်ဆက်မပြတ်အလုပ် groundbreaking ထုတ်လုပ်ရန်နှင့်ရလဒ်များကိုအံ့မခန်းဖြစ်ကြသည့်အခါသာကျေနပ်မှုရှိပါသလဲရန်နည်းလမ်းအသစ်များကိုတီထွင်နေသောပြည်သူ့။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်သူများ "မ" သူတို့ကဘယ်လိုထွက်တွက်ဆမပြောကြဘူး။
ဘက်ပေါင်းစုံထုတ်လုပ်သူများစတင်ဖွဲ့စည်းထံမှပြီးစီးဖို့အားလုံးစီမံကိန်းကိုဒြပ်စင်များနှင့်အဆင့်ပေါ်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ သူတို့ကစိတ်ကိုစာဖတ်သူများသည်စီမံကိန်း၏အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကိုအသေးစိတ်သိရန်နှင့်ဖိအားအောက်တွင်အေးမြနေပါသောသူပဉ္စလက်ထုတ်လုပ်သူများပါပဲ။ ဘက်ပေါင်းစုံထုတ်လုပ်သူယဉ်ဇွဲနှင့် drive ကိုအတူပြည်တွင်းရေးနှင့် client ကိုသင်းစီမံခန့်ခွဲသူကိုဖြေရှင်းချက်-အာရုံစူးစိုက်ပြဿနာ solver ဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါပေါင်းစည်းထုတ်လုပ်သူစီမံကိန်းကိုအတိုင်းအတာများနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းအတွက်ခိုင်မာတဲ့ဖြစ်ရမည်။ သူတို့ကတစ်ဦးချင်းစီအဖွဲ့ကအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏အခန်းကဏ္ဍနှင့် function ကိုအကျွမ်းတဝင်များနှင့်ကောင်းစွာမျိုးစုံပလက်ဖောင်းအနှံ့လှုပ်ရှားမှုများကွပ်မျက်ကိုလညျးတတျကြှမျးသူဖြစ်ရမည်။ အလုပ်၏အရည်အသွေးနှင့်သမာဓိရှိကာကွယ်ရေးနှင့်ဖန်တီးမှုဗျာဒိတ်ရူပါရုံနှင့်ရည်ရွယ်ချက်မှစစ်မှန်တဲ့ကျန်ရှိနေချိန်တွင်သူတို့ကတိုင်းစီမံကိန်းကို impact သောအချိန်နှင့်ဘတ်ဂျက်အခက်အခဲဖန်တီးမှုဖြေရှင်းချက်ရှာဖွေနောက်ဆုံးမှာတာဝန်ရှိသည်။
အဆိုပါပေါင်းစည်းထုတ်လုပ်သူအားလုံးအဆင့်တစ်လျှောက်လုံးစီမံကိန်းများအတွက်တာဝန်ရှိစီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအရင်းအမြစ်ဖြစ်၏ အစေး, ဘတ်ဂျက် / SCOPE, ကွပ်မျက်, ပစ်လွှတ်, နောက်ကြောင်းပြန်။
client ရဲ့စီးပွားရေး, လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်, မျှော်လင့်ချက်များနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုတစ်ဦးနားလည်မှုဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်ပြသသည်။
အကောင်းဆုံးထူထောင်သတ်အတွင်း client ကိုရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းမည်ကိုမဟာဗျူဟာများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများသတ်မှတ်။
ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုခန့်မှန်းချက်စီမံကိန်းအစီအစဉ်များ, အဆိုပြုချက်, အလုပ်၏ထုတ်ပြန်ချက်များ, status ကိုအစီရင်ခံစာများ (ပြည်တွင်းရေးနှင့်ပြင်ပ), ပြောင်းလဲမှုတောင်းဆိုမှုများ, functional ဖြစ်စေသတ်မှတ်ချက်များအဖြစ်စီမံကိန်းကိုစာရွက်စာတမ်းများဖန်တီးထိန်းသိမ်းထား
ဖွံ့ဖြိုး, ပိုင်ဆိုင်မိတ်ဖက်အချိန်ဇယားပေါင်းစည်းမှု၏အားလုံးပါဝင်နိုင်ခြုံငုံကမ်ပိန်းပရောဂျက်ကိုဘာလဲဆိုတော့အချိန်များအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ စီစဉ်ထားအဖြစ်စီမံကိန်းကိုတာဝန်များကိုပြီးစီးခဲ့ဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်စီမံကိန်းအဖွဲ့အားလုံးလှုပ်ရှားမှုများကိုသြဒိနိတ်။
စီမံကိန်းကို-related ပြည်တွင်းရေးအသင်းအစည်းအဝေးများ (စသည်တို့ကိုဆိုလိုသည်မှာကန်-off, အခြေအနေ, သုံးသပ်ချက်များ,) နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်နှင့်အဖွဲ့အရေးယူခြေလှမ်းများဆက်သွယ်။
တက်တက်ကြွကြွမလိုအပ်အဖြစ်ဆီလျှော်မှု, နည်းဗျူဟာ, အရည်အသွေးနှင့်ဘာလဲဆိုတော့အချိန်သေချာစေရန် key ကို client ကိုကယ်နှုတ်တော်မူ၏အကြောင်းအရာနှင့်တင်ပြချက်အပေါ်ပူးပေါင်းအပေါင်းတို့, စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအတွက်ပါဝင်။
ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်စနစ်တကျအေဂျင်စီကိရိယာများနှင့်စာရွက်စာတမ်းသိုလှောင်မှု repositories ကဖြတ်ပြီးတိကျမှုစီမံကိန်းကိုစာရွက်စာတမ်းများသိုလှောင်ပိုင်ဆိုင်သည်။
စသည်တို့ကိုခန့်မှန်းချက်အပါအဝင်စီမံကိန်းအားဘဏ္ဍာရေးဘဝမှတ်တိုင်သံသရာစက်ဝိုင်း, status ကိုအစီရင်ခံ, ငွေတောင်းခံမှု, စီမံခန့်ခွဲခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိသည်
စီမံကိန်းကိုသတ်မှတ်ရက်, သမိုင်းမှတ်တိုင်များနှင့်မှီခို၏ဆက်သွယ်ရေးနှင့် drives တွေကိုလက်ခံမှု။
စီမံကိန်းကိုကိစ္စများ / အန္တရာယ်များကိုမျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း client ကို, မိတ်ဖက်များနှင့်ပြည်တွင်းရေးအဖွဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဆက်သွယ်ဖို့စွမ်းရည်။
အဖွဲ့ဝင်များနှင့် client များအဖွဲ့အခန်းကဏ္ဍနှင့်တာဝန်များကိုဆက်သွယ်။
အားလုံးလိုအပ်ပိုင်ဆိုင်မှု, အရင်းအမြစ်များ, စရိတ်နှင့်သတ်မှတ်ရက်ကိုအောင်မြင်စွာစည်းရုံးရေးမျှော်လင့်ချက်များနှင့်စီမံကိန်းရည်မှန်းချက်များဖြည့်ဆည်းဖို့တစ်ရက်-to-နေ့ကဖော်ထုတ်နှင့်စီမံခန့်ခွဲနေကြသေချာစေရန် (ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းနှင့်ပြင်ပမှ) Cross-function အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
အရင်းအမြစ်မန်နေဂျာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဌာနစီမံကိန်းများကိုသင့်လျော်စွာစီမံကိန်းကိုဆိုင်းအပေါ်အခြေခံပြီး staffed နှင့်အချိန်မီထုံးစံ၌ဝန်ထမ်းများလိုအပ်ချက်များကိုညှိဖြစ်ကြောင်းသေချာစေပါတယ်။
In-အိမ်သူအိမ်သားစတူဒီယိုထုတ်လုပ်မှုများအတွက်: အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်မှုကြီးကြပ် (ဗီဒီယို, ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုထောက်ပံ့ပေး, မာလ်တီမီဒီယာ) ဖန်တီးမှုအယူအဆ, စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, Pre-လိုလားသူ, ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ post ထုတ်လုပ်မှုကနေအကြောင်းအရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအားလုံးအဆင့်ဆင့်များအတွက်စတူဒီယိုအသင်းနှင့်အတူ
ခဲနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်, အတွေ့အကြုံ, အကြောင်းအရာ (နေဆဲ & ရွေ့လျားမှု) မှထုတ်လုပ်မှု၏မျိုးစုံရှုထောင့်နားလည်, ပုံနှိပ်။
ရောင်းချသူရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် input ကိုထောက်ပံ့
3 - ကအနည်းဆုံး4နှစ်ပေါင်းအတူစီမံကိန်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအခန်းကဏ္ဍများတွင်အတွေ့အကြုံ2နှစ်ပေါင်းထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံကို (အပြန်အလှန် / ဒစ်ဂျစ်တယ်, content တွေကိုထုတ်လုပ်မှု, OOH, TVC) ပေါင်းစည်း
$ 1MM ကျော်မျိုးစုံဘတ်ဂျက်စီမံခန့်ခွဲ
အတှေ့အကွုံ 10-15 လူတွေမှတက် interdisciplinary အသင်းများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း
ဖော်ထုတ်ဖြေရှင်းရန်ကိစ္စများ, အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲ, အသေးစိတျဘာလဲဆိုတော့အချိန်နှင့်သတ်မှတ်ချက်များဖွံ့ဖြိုး, အရင်းအမြစ်ခွဲတမ်းလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်အဖွဲ့သည်အစည်းအဝေးများ run ဖို့စွမ်းရည်အပါအဝင်စီမံကိန်းအားစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းစနစ်များအစိုင်အခဲနားလည်မှု။ PMP လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးတစ်ပေါင်း။
အောက်ပါတို့မှတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောအစိုင်အခဲအသိပညာ: ရေတံခွန်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတဘဝသံသရာ, သွက်လက်ဆော့ဖျဝဲဖှံ့ဖွိုးတိုးတဘဝသံသရာ, ကို web နှင့်မိုဘိုင်းနည်းပညာများနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ။
စီမံကိန်း running ၏ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်းများတစ်ဦးနားလည်မှုပေါ်ထွန်းရေးဖြစ်သည်။
နည်းဗျူဟာနှင့်မဟာဗျူဟာမြောက်စီမံကိန်းအားကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်. ပြဿနာဖန်တီးမှုဖြေရှင်းနည်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့စွမ်းရည်။
တစ်ပြိုင်နက်တည်းမျိုးစုံစီမံကိန်းများအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့စွမ်းရည်။ သာလွန်စားပေးကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ပေးထားသောနေ့အဘို့တစ် Dime အပေါ်အာရုံကိုပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းပြသသည်။
စီမံကိန်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှုကိရိယာများ, က MS စီမံကိန်းနှင့် MS Office အတွက်ကျွမ်းကျင်မှု။
အစဉ်အမြဲချောမွေ့စေရန်ဆန်းသစ်နည်းလမ်းတွေရှာနေသူ process-geek ။
ကြှနျုပျတို့န်ထမ်း, သင်ယူပြောင်းလဲမှုနှင့်အမျှအစာရှောင်ခြင်းသူတို့ကိုလှည့်ပတ်ကမ္ဘာကြီးကိုအဖြစ်ကြီးထွားနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာပွင့်လင်း, အားလုံးပါဝင်နိုင်, ကွဲပြားခြားနားပတ်ဝန်းကျင်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်မွေးမြူရန်ကျူးလွန်နေကြသည်ဟုပြောသည့်အခါကျနော်တို့ကဆိုလို။ Cheesy? ဖြစ်နိုင်စရာ။ စစ်မှန်သော? လုံးဝ။
တစ်ဦးက start-up, ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှင်သန်
ယဉ်ကျေးမှုအမြော်အမြင်နှင့်အတူအချက်အလက်များ၏ပါဝါကိုပေါင်းစပ်ပြီး, Unlimited မက်ဒေါ်နယ်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏အမြန်နှုန်းနှင့်ရှုပ်ထွေးမှုအတွက်သီးသန့်ဒီဇိုင်းတစ်ခု Omni-ရုပ်သံလိုင်းအေဂျင်စီသည်နှင့် Omnicom Group မှဖြတ်ပြီးနှင့်ကျော်လွန်ပြီးထံမှအကောင်းဆုံးနှင့်တောက်ပခွက်တဆယ်နှင့်လူနေထူထပ်။ ကျနော်တို့အမြန်နှုန်း, စကေးနှင့်ထိရောက်မှုမှာ, နှင့်မကြုံစဖူးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူကမ္ဘာ့အဆင့်မီဖန်တီးမှုအလုပ်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြေရှင်းချက်ကယ်နှုတ်အသုံးချ, မက်ဒေါ်နယ်နှင့်တိုက်ရိုက်ပူးပေါင်းအလုပ်လုပ်ကြသည်။ မက်ဒေါ်နယ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ကို client ဖြစ်ပါတယ်ကြှနျုပျတို့သညျဤကမ္ဘာကျော်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုမှုတွင်အေဂျင်စီတည်ဆောက်သောကြောင့်တစ်ဦးတည်းသောအာရုံဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါတို့သည်ဤအမှတ်တံဆိပ်ခေါင်းဆောင်များအတွက်မီးရှူးတိုင်သယ်ဆောင်ကာ ပို. ပင်အောင်မြင်သောအနာဂတ်ဖို့ဒီထပ်အမှတ်တံဆိပ်အရှိန်အဟုန်မြှင့်ကူညီပေးဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုရှိသည်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုမြင်သောပညာရှင်များရှာကြာလော့။
Downtown ချီကာဂို၏စိတ်နှလုံးထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Workspace ကိုလုံးဝရည်ရွယ်ချက်-built လှုံ့ဆော်မှု, ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်မြန်နှုန်းဆီသို့တစ်အာရုံနှင့်အတူရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယဉ်ကျေးမှုတန်းတူအတိုင်းအတာထဲမှာဇာတ်ကောင်များနှင့်ယာဉ်အတွက်အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးထားပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ပူးပေါင်းဝိညာဉျစပ်စုစိတ်, နှင့်၎င်း၏အမာခံမှာကြင်နာမှုရှိပါတယ်။ ဤသည်မှာအေဂျင်စီလူ့အလားအလာအမှန်တကယ်အဆမဲ့ဖြစ်ပြီး, သာအပြည့်အဝကလူရိုသေလေးစားမှုကိုအတူတကွအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာလွှတ်ခြင်းနှင့်ပါရမီတန်းတူအဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတန်ဖိုးထားသောအယူအဆပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားပါသည်။
ကျနော်တို့အနေနဲ့ညီမျှအခွင့်အလမ်းအလုပ်ရှင် (EOE) ဖြစ်ပါသည်န့်အသတ်ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်သားအင်အားမှာမတူကွဲပြားမှုတွေကိုထောကျပံ့။
ပေါင်းစည်းမှု အသံလွှင့်ကုန်တင်ကားအပြင်ဘက်တွင် post ကိုထုတ်လုပ်မှု 2017-09-30
နောက်တစ်ခု: NOC အင်ဂျင်နီယာချုပ်ငါ